Self-namira High Polymer Bhitumini mvura Membrane - China Xinle Hongtai Waterproof
Self-namira High Polymer Bhitumini mvura Membrane
Ukobvu: 3mm, 4mm
Application: denga, pevhu, bhesimendi, rusvingo, dziva, etc
Pamusoro zvinhu: Pe firimu, Aluminum foil, Sand, Schist flake, etc
Low tembiricha mukana wokushandiswa: -30 ° C, -20 ° C
High tembiricha mukana wokushandiswa: 70 ° C
Storage nguva: One gore
yemapuranga nyaya kana nhovo / PS: Tine rakazvimiririra kodzero kuti imupota uye ekisipoti.
10 Mazuva mushure mekugamuchira 30%
Polyester Self-namira Modified Bituminous mvura Membrane ine bhitumini yayo huru zvinoriumba, SBS, SBR uye tackifying nebwe sezvo wayo modifier uye polyester sezvo kwayo chisimbiso. Its yokumusoro pamusoro akafuka polyethylene (Pe) firimu, jecha kana strippable nesilicon firimu uye ayo pasi pose akafuka paradzanisa kusunungurwa firimu.
1. Tackifying nebwe anopa Kamudzira pamwe simba simba namira unogona membranes vanoomerera nechigadziko pamusoro zvakasimba.
2. Kamudzira rine zvakanaka ponji nemishonga, misodzi nemishonga uye hasha nemishonga pfuma pamwe polyester sezvo kwayo chisimbiso.
3. membranes zvinogona nokuzvidzora kuporeswa nokuda tuduku makatsemuka anokonzerwa ezvinhu.
4. Long-nguva stickiness rinotivimbisa hapana kuwa-kure kana leakage pakati Kamudzira nechigadziko pamusoro.
5. The Kamudzira aine tensile simba uye yakanaka elongation pfuma, anogona kuramba chimiro zvaro kuna makatsemuka uye deformation pamusoro nechepasi pemvura.
6. Hapana huchidonha panguva mukuru tembiricha uye hapana makatsemuka panguva tembiricha yakaderera.
7. Excellent makemikari nemishonga, ngura kuzvidzivirira uye weathering nemishonga.
Construction nzira uye kutarisirwa:
1) Basic okuchenesa
Chenesa Marara, anoyera kure kana paine yakapinza chitsama, zvinogona kuvaka pasina mvura, unyoro ndiyo tendera.?
2) kugadzira mvura jira Kamudzira
akatambanudza pamusoro isapinda jira Kamudzira pamwe nezvimedu dzakatarisa pamusoro zimba, Kana tichigadzira pedyo jira membrane. teererai bindepinde mupendero kunangiswa kuchengeta bindepinde pasina gwanza.
3) bindepinde vadyi isapinda jira Kamudzira
(1) bindepinde isapinda jira Kamudzira: Putsira kure Zindoga Kamudzira ari Double-divi kuzvidzora namira kuti polymer pasi pose, Bvisai tepi achifinyamisa zvakare pashure voga firimu pamusoro pemvura, uye zvakabatanidzwa kune coils vachatitaka tora kuti namatidza patepi, apwanye simba tichisunga, kana zvakakodzera kuti tepi akakodzera kudziyisa, namatidza mugumisiro zvikuru ideal.more nyanzvi kuti aiyanika ezvinhu anofanira kushandisa.
(2) bindepinde kwemajoini mvura jira Kamudzira: nefoshoro guruu tsvimbo tepi pashure pamakumbo, nzira iri kushanda isapinda rukoko kungava mvura mvura.
(3) garo vadyi isapinda jira Kamudzira ocking coils tichisunga zvinhu nemaonero DNM coils, Coil racherwa ubvise uye isa guruu chiso kumusoro, trea nokupedzwa pashure voga Kamudzira, namatidza yokumusoro garo pamusoro coils, uye simba apwanye kuti tichisunga. nzira yakakodzera isapinda rukoko kungava mvura mvura, unogona kudzivisa saka kusunungurwa.
4) namatidza ngaakuitirei:? DNM mupumburu angled pakati Yin uye Yang uye raiva pedyo nebundu hakudi okuwedzera rukoko kuvaka, asi guru coils chitoro namatidza rapera pashure raiva pedyo nebundu hwokubata nezvokuzadziswa marongerwo wakakwana uye tightness of cheki kugadzira , aiming panguva nemurwi musoro pauriri yepasi, bhaudhi, drains the uye mamwe mashoko, vanofanira kushandisa consolidates pamwe namira tepi, ipapo kukwesha isapinda unhani chisimbiso ngaakuitirei.
5) sangano kugamuchirwa
6) Zvadaro kuvakwa: kupedza kuvaka isapinda layer inogona yanyatsosimba kongiri binding.d voga rukoko - After Kamudzira achiisa, kuvaka kudzivirirwa uye voga rukoko maererano isapinda rukoko nepurani.
1. nhurikidzwa, chimbudzi, kicheni
2. Tunnels, Industrial matenga
3. Flat uye sloped pedzimba
4. mudzimba, Foundation uye ukaramba masvingo
Storage & ainge atumirwa
Uise Kamudzira vertically.
Pamu simba huni nhovo nokufukidzwa vanodzokera firimu kana kuti slant
Rambai kure moto panguva okuchengetera neyokufambisa.
Membranes zvinofanira kuchengetwa pasi pakaoma uye ventilated mamiriro ezvinhu kuitira kuti varambe kure chiedza chezuva uye kuchinaya.
Tinokoshesa wobvunzisisa ose akatuma kwatiri uye nechokwadi chinhu nokukurumidza makwikwi kupa. Kana kuti isu, tinogona kuvimbisa unhu.
Tinoisa hurongwa wako edu zvakasimba kugadzirwa purogiramu kuitira iwe nguva Delivery nguva uye kutumira kutumirwa chiziviso kwamuri nokukurumidza kuitira yako nengarava. Tinoremekedza inofambiswa vako vanokutevera vagamuchira nhumbi.
Nekuti tine makore anopfuura 10 mubasa isapinda indasitiri, zvigadzirwa edu ose awirirane yenyika kutevedzerwa! Tinogona kuvimbisa rakaisvonaka basa uye nokukurumidza pakusununguka! Hurongwa wako welcome chero nguva!
Previous: Cheap Price Self-namira Polymer Bhitumini Waterproof Roofing Membrane
Next: Waterproof zvinhu dzaFord Bhitumini Kamudzira Production Line Kamudzira bhitumini dzaFord
Bhitumini Waterproof Membrane
Bituminous mvura Membrane
Bituminous mvura Products
Flat Roof risingapindi mvura Membrane
Sbs Modified Bhitumini Roofing Sheet
Usazviomesera Asphalt mvura Sheet Material / w ...
Roll mutengo sbs dzakachinjwa bhitumini nemakadhibhokisi papepa
1.5mm-5mm SBS Modified elastomeric Asphalt Wate ...
SBS / APP Modified elastomeric bhitumini Waterproof ...
3mm, 4mm Self-namira bhitumini isapinda membra ...
3mm, 4mm Self-namira bituminous isapinda Mem ...